बिबिसीका पत्रकारहरुको वार्षिक तलब प्रतिवेदन सार्वजनिक (कसले कति कमाउँछन् ? ) - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ७ श्रावण २०७४, शनिबार ०४:२६ |
एजेन्सी । नेपालमा सबैभन्दा बढी कमाउने मिडियाकर्मी को होला ? कुन टेलिभिजन होस्टले कति कमाउलान् ? नेपालका प्रमुख मिडियाका सम्पादकले वार्षिक कति पैसा बुझ्लान् ? सबैभन्दा बढी कमाउने रेडियो एङ्कर को होला?
हाम्रा सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू बेकारका पनि हुन सक्छन् किनभने हामीकहाँ न त सम्बन्धित मिडिया हाउसले यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् न त उनीहरूले दरबन्दीलगायत विवरण बुझाउने सरकारी निकायले नै यसको सूचना दिन्छन्। नेपालमा पनि मासिक ६ अंकको तलब बुझ्ने पत्रकार/मिडियाकर्मी नभएका होइनन् तर त्यसको विवरण सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन।
उता बेलायतको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) ले भने १९२ पृष्ठको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेर आफ्ना प्रस्तोता/सञ्चालक/पत्रकारले वार्षिक कति तलब पाउँछन् भन्ने विवरण खुलाएको छ। वार्षिक १५० हजार पाउन्ड (करिब दुई करोड रुपैयाँ) र त्यो भन्दा धेरै कमाउने प्रस्तोता/पत्रकारको नाम र उनीहरूले पाउने तलबको विवरण समावेशगरी बीबीसीले पहिलोपटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
‘बीबीसी एनुअल रिपोर्ट एन्ड अकाउन्ट्स २०१६/१७’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदन बेलायत सरकारले यसै साता त्यहाँको संसदलाई बुझाइएको हो।
यसअघिका वर्षहरूमा बीबीसीले यो सूचना सार्वजनिक गर्दैनथ्यो तर सन् २०१६ मा ल्याइएको नयाँ रोयल चार्टरले यो सूचना सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
बढी कमाउनेको सूची
१५० हजार पाउन्ड भन्दा बढी कमाउने प्रस्तोता र पत्रकारको पारिश्रमिक बीबीसीको इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको हो। त्यसो त बढी कमाउनेको सूचीमा रहेकाहरू आफैमा स्टार हुन्, सेलिब्रेटी हुन्।
बढी कमाउनेको सूचीमा दुई तिहाई पुरुष छन्। सूचीमा माथि रहेका ७ जना पुरुष छन्, सबैजना स्वेत छन् र ५० वर्ष उमेर भन्दा माथिका छन्। टप टेन सूचीमा तीन जना महिला पत्रकार छन्।
१) क्रिस इभान्स
प्रस्तोता क्रिस इभान्स वार्षिक २.२ मिलियन पाउन्डभन्दा बढी कमाउँछन् अर्थात करिब २९ करोड नेपाली रुपैयाँ। बीबीसी रेडियो फाइभ लाइभका ५१ वर्षिय क्रिस रेडियो र टेलिभिजन प्रोड्युसर हुन्। सन् २००५ देखि बीबीसीमा रहेका उनको ब्रेकफास्ट सो चर्चित छ। मिडियाको काम सँगसँगै उनले कार्यक्रम उत्पादन व्यवसायतिर पनि हात हालेर व्यवसायी छवि बनाइरहेका छन्।
२) ग्यारी लिनिकर
बीबीसी वन टिभीको कार्यक्रम ‘म्याच अफ द डे’ का सञ्चालक पूर्व फुटबलर ग्यारी लिनिकर सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्। उनले वार्षिक १.७५ मिलियन पाउन्ड अर्थात २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बुझ्छन्। डेलिमेलले उनले पाउने रकमको लेखाजोखा गर्दै उनले प्रति मिनेट ३०० पाउन्ड कमाउने गरेको हिसाब निकालेको छ।
३) ग्राहम नोर्टोन
बीबीसी रेडियो टू मा शनिबार बिहानको सो सञ्चालन गर्ने नोर्टोन बीबीसी वनमा शनिबार साँझ अर्को ट्यालेन्ट सो ‘लेट इट साइन’ पनि चलाउँछन्। उनले ८५० हजार पाउन्ड अर्थात करिब ११ करोड रुपैयाँ वार्षिक बुझ्छन्।
अरु को को छन् टप लिस्टमा? हेर्नुस् र आफै हिसाब गर्नुस् :
१० मध्ये ३ मा महिला
Programme Name: Strictly Come Dancing 2015 – TX: n/a – Episode: n/a (No. n/a) – Picture Shows: Claudia Winkleman – (C) BBC – Photographer: Ray Burmiston
विङ्कलम्यान सबैभन्दा बीबीसीकी सबैभन्दा बढी कमाउने महिला सेलिब्रेटी हुन्। उनको कमाई ४४० हजार पाउन्डदेखि ५ लाख पाउन्ड (करिब ६ करोड रुपैयाँ) छ। उनको चर्चा पत्रकार र टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा मात्र छैन, मोडलिङ र फिल्म समीक्षकका रुपमा पनि उनको अलगै छवि छ।
एलेक्स जोन्स बढी कमाउने महिलाको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन्। ४० वर्षिय एलेक्सको कमाई क्लाउडिया विङ्कलम्यानको भन्दा ५० हजार पाउन्ड (करिब ६६ लाख रुपैयाँ) मात्र कम छ।
बीबीसीले आफ्ना प्रस्तोता र पत्रकारको तलब सार्वजनिक गरेपछि त्यसले बीबीसी भित्रमात्र होइन, बेलायतसहित अन्य देशका मिडियामा पनि त्यो समाचार बन्यो। गार्डियनले त उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि लाइभ अपडेट नै दिएको थियो। मिररले पनि अपडेट दिएको थियो।
वार्षिक प्रतिवेदनले स्वेत (ह्वाइट) तथा अस्वेत (ब्ल्याक), एसियन र अल्पसंख्यक जनजाति प्रस्तोताहरूबीच तलबको ठूलो खाडल रहेको खुलासा गरेको छ। महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी कमाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
थ्रेसहोल्डका कारण प्रतिवेदनमा नाम नआएका कतिपय प्रस्तोता र पत्रकारहरूले सोसल मिडियामार्फत स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो तलब सार्वजनिक गरेको बीबीसीले लेखेको छ। उनीहरूले परदर्शिताका लागि भन्दै आफ्नो तलब खुलाएका हुन्। उदाहरणका लागि राजनीतिक सम्वाददाता क्रिस म्यासनले भनेका छन्- ‘राजनीतिक सम्वाददाताका रुपमा म ६० हजार पाउन्ड कमाउँछु। यो संसारकै राम्रो काम हो।‘
तर कतिपयले भने आफ्नो तलब सार्वजनिक गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्।
बीबीसीका पत्रकार र प्रस्तोताबीच राम्रै बहस ट्‍विटरमा भएको देखिन्छ।
बीबीसीका महानिर्देशक टोनी हलले भनेका छन् कि तलबमा देखिएको लैंगिक खाडल कम गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ।
बीबीसी दर्शक संख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रसारण संस्था हो । बीबीसीले १० वटा राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानल, १० वटा राष्ट्रिय रेडियो स्टेसन सहित बीबीसी रेड बटन इन्टरएक्टिभ टेलिभिजन सञ्चालन गरेको छ । यस्तै उसँग स्कटल्यान्ड, वेल्स, दक्षिणी आयरल्याण्डमा छुट्टाछुट्टै रेडियो र टेलिभिजन सेवा छन् भने ४० भन्दा बढी स्थानीय रेडियो स्टेसन छन् ।
नेपालमा अधिकांश पत्रकारलाई (र, मालिकलाई पनि) चिन्ता १९ हजार ५०० को भए पनि ठूला सम्पादक र सेलिब्रेटी छविका प्रस्तोताहरूको कमाई भने राम्रै छ। यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्यांक भने पाइन्न।
दुई वर्षअघि गुन्द्रुक पोस्ट डट कमले मुख्य पत्रिकाका सम्पादहरूको कमाई कति छ भनेर सामग्री छापेको थियो। कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले ३० लाख, अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक युवराज घिमिरेले १४ लाख (राजीनामा दिएका), नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले १५ लाख, द हिमालयन टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले १४ लाख ४० हजार, राजधानी दैनिकका सम्पादक राजन शर्मा (राजीनामा दिएका) ले ७ लाख ५० हजार वार्षिक पारिश्रमिक बुझ्‍ने उसको दावी छ।
यस्तै रिपब्लिका दैनिकका सुभाष घिमिरेले २४ लाख, नयाँ पत्रिकाका कृष्णज्वाला देवकोटाले १४ लाख, द काठमाडौं पोस्टका अखिलेष उपाध्यायले २४ लाख, आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले १४ लाख, नेपाल म्यागेजिनका प्रशान्त अर्यालले २० लाख, अनलाइनखबरका अरुण बरालले १० लाख वार्षिक बुझ्ने गरेको गुन्द्रुकपोस्टको दावी छ।
साभार : मिडिया कुराकानी
Previousअगस्टबाट ‘भाजपा भारत छोड’ आन्दोलन !
Nextआमा बनिन् सनी लियोनी
सुन तस्करपछि गृहमन्त्रीको नजर लागूऔषध कारोबारीमा
२० बैशाख २०७५, बिहीबार ०५:११
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०२:५४